मेरो पहिलो चुम्बन - म्यागेजिन - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
एन फ्य्राङ्क २८ पुस
आइतबार, १६ अप्रिल १९४४
हिजोको दिन नबिर्स।
त्यो मेरो जीवनको अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन थियो।
पहिलो चुम्बन प्राप्त गरेको दिन हरेक केटीका लागि विशेष हुन्छ।
अचानक कसरी यो चुम्बन प्राप्त गरें? विस्तारमा बताउँछु।
हिजो साँझ् आठ बजे सोफामा पिटरसँग बसिरहेकी थिएँ। एकै छिनमा उसले आफ्नो हात मेरो काँधमा राख्यो। ‘मेरो टाउको दराजमा ठोकिन लाग्यो’, मैले भनें, ‘अलिकति उता सर न।’
ऊ झण्डै कुनासम्मै सर्यो। मैले आफ्नो हात उसको पाखुरामुनिबाट ढाडमा राखें। ऊबाट लगभग छोपिएकी थिएँ। उसको हात मेरो काँधमा थियो।
म पिटरको अँगालोमा थिएँ। हामी यसरी अरू बेला पनि नबसेका होइनौं, तर हिजोजति निकट कहिल्यै भएका थिएनौं। उसले मलाई दह्रो गरी आफूसँग टाँस्यो। मेरो देब्रे कुम उसको छातीमा टाँसिएको थियो। मेरो मुटु जोडजोडले ढुकढुक गर्न थालिसकेको थियो।
अझै धेरै कुरा हुन बाँकी थियो।
मैले आफ्नो टाउको उसको कुममा र उसले मेरो टाउकोमा आफ्नो टाउको नराखुञ्जेल ऊ सन्तुष्ट भएन। लगभग पाँच मिनेटपछि म सीधा बसें तर उसले तुरुन्तै मेरो टाउको तानेर एक पटक फेरि आफ्नो टाउकोमा टाँस्यो। ओहो, यो अत्यन्त आनन्ददायी थियो। म धेरै बोल्न सकिनँ तर आनन्द अपरिमित थियो। उसले अलिक ढंग नपुर्याइ मेरो गाला र पाखुरा मुसार्यो। मेरो कपालको गुच्छासँग खेल्यो। हाम्रा गाला जोडिएका थिए। त्यो पूरै समय मलाई कस्तो अनुभूति भयो, बताउन सक्दिनँ, किट्टी। शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने गरी खुशी भएकी थिएँ। मलाई लाग्छ, ऊ पनि उत्तिकै खुशी थियो।
हामी साढे आठ बजे उठ्यौं। घरमा यताउता हिँड्दा आवाज नआओस् भनेर पिटरले कसरत गर्दा लगाउने जुत्ता लगायो। म उसको छेउमा उभिइरहें। अचानक यो कसरी भयो, मलाई थाहा छैन। उसले मलाई कपाल बाहिरबाट चुम्यो, आधा देब्रे गालामा र आधा मेरो कानमा। म पछाडि फर्केर नहेरी मुन्तिर बत्तिएँ।
सोमबार, १७ अप्रिल १९४४
तिमीलाई के लाग्छ, बुबा र आमाले मलाई सोफामा बसेर केटोसँग चुम्बन गर्न मञ्जुरी दिनुहोला? साढे सत्र वर्षको केटो र पन्ध्र पनि नपुगेकी केटीलाई उहाँहरूले किन त्यसो गर्न दिनुहुन्थ्यो? अनि मैले कसैको अनुमति किन लिनुपर्छ? उसको अँगालोमा बेरिएर सपना देख्दा शान्ति प्राप्त हुन्छ। उसको गाला मेरो गालामा टाँसिँदा अत्यन्त रोमाञ्चित हुन्छु। कोही मेरो प्रतीक्षामा रहनु अत्यन्त आनन्दको कुरा हो।
मलाई प्रस्टसँग थाहा छ, म प्रेममा अलिक छिटो अगाडि बढेकी छु। पन्ध्र वर्ष पनि नपुगी यति स्वतन्त्र भइसकें!
स्वयंवर वा विवाहको कुरा नचली दिदीले कुनै केटोलाई चुम्बन गर्ने छैनन्। मलाई यकिन छ, आमाले पनि बुबाभन्दा पहिले कुनै मानिसलाई छुनुभएको थिएन। म पिटरको अँगालोमा बेरिएको, मेरो मुटु उसको छातीमा टाँसिएको, मैले उसको कुममा शिर अड्याएको र हामी दुई जनाको चेहरा आपसमा टाँसिएको कुरा थाहा पाए भने मेरा केटी साथीहरूले के भन्लान्? ‘ओहो एन, कति लाजमर्दो’ भन्लान्।
तर, यसमा लज्जाको कुरा के छ? हामी संसारबाट निकै पर छौं। भय र चिन्ताका बन्दी छौं। यस्तो बेलामा एकअर्कालाई माया गर्नेहरू किन छुट्टिएर बस्ने? उमेर पुगुञ्जेल किन पर्खेर बस्ने?
मलाई पीडा होस् भन्ने ऊ कहिल्यै चाहँदैन। हामी दुवैलाई खुशी प्राप्त हुन्छ भने म आफ्नो मनले चाहेको बाटो किन नहिँडूँ? तैपनि किट्टी, म द्विविधामा रहेको तिमी बुझन सक्छौ। मेरो इमानले मलाई लुकीछिपी कुनै काम गर्न दिँदैन। तिमीलाई के लाग्छ, म जे गरिरहेकी छु, त्यसबारे बुबालाई सुनाउनु मेरो कर्तव्य हो? यो रहस्य तेस्रो व्यक्तिलाई सुनाउनु ठीक होला? त्यसो गर्दा यसको सुन्दरता धेरै गुम्नेछ तर मेरो आत्मा अलि खुशी होला कि? म यसबारे पिटरसँग छलफल गर्नेछु।
अझै ऊसँग धेरै कुरा गर्न चाहन्छु। एकअर्काको अँगालोमा बेरिनु मात्रैको कुनै अर्थ हुँदैन। हामीले आफ्ना विचार आदानप्रदान गर्नुपर्छ। यसले हामीबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नेछ र हामी दुवैको भलो गर्नेछ।
(यसै साता बजारमा आएको पुस्तक ‘एक किशोरीको डायरी’ बाट। विश्वप्रसिद्ध पुस्तक ‘डायरी अफ अ योङ्ग गर्ल’ को यो नेपाली अनुवाद पत्रकार खगेन्द्र गिरीले गरेका हुन्, जसलाई सिकाइ समूहले प्रकाशन गरेको हो)
प्रकाशित २८ पुस २०७५, शनिबार | 2019-01-12 18:36:00
एन फ्य्राङ्कबाट थप